डिक्लोफेनाक बनाम आईबुप्रोफेन: भिन्नता, समानता, र जुन अझ राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी कम्पनी, चेकआउट कल्याण समुदाय औषधि जानकारी औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस कम्पनी, समाचार समुदाय, कम्पनी समुदाय, कल्याण समाचार खेलहरु
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> डिक्लोफेनाक बनाम आईबुप्रोफेन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
गठिया को उपचार को लागी धेरै विकल्प संग, यो तपाइँ को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधी छान्दा भारी हुन सक्छ। यदि तपाईं नियमित रूपमा गठियाको दुखाइ अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई डिन्क्लोफेनाक वा आइबुप्रोफेन जस्तो नन्स्टेरॉइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) सिफारिश गर्न सकिन्छ। यी औषधीहरूले प्रोस्टाग्लैन्डिन, वा सूजनको लागि जिम्मेवार रसायनको उत्पादन घटाएर काम गर्दछ।
डिक्लोफेनाक र आईबुप्रोफेन सामान्यतया एनएसएआईडी प्रयोग गरिन्छ जुन सूजन र पीडाको उपचार गर्न सक्छ ओस्टियोआर्थराइटिस र संधिशोथ। दुबै औषधिहरू गैरचयनकारी एनएसएआईडीहरू हुन् जसको मतलब हो कि उनीहरूले COX-2 र COX-1 एंजाइमहरूलाई ब्लक गर्छन् प्रोस्टाग्लैन्डिन उत्पादनको लागि। किनभने COX-1 एन्जाइमले पेटको परतमा सुरक्षाात्मक प्रभावहरू पनि पार्दछ, यस एंजाइमलाई रोक्नाले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ।
डिक्लोफेनाक बनाम आइबुप्रोफेन बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
डिक्लोफेनाक (डिक्लोफेनाक कुपन) एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो जुन ब्राण्ड नाम, भोल्टारेनबाट पनि जान्छ। यो सामान्य औषधीको रूपमा उपलब्ध छ जुन ओस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटोइड गठिया, र ankylosing spondylitis, वा मेरुदण्डलाई असर गर्ने गठियाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। डिक्लोफेनाक सोडियम ढिलाइ-रिलीज ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेट, र सामयिक जेल वा समाधानको रूपमा आउँदछ। यो १DA बर्ष वा माथिका वयस्कहरूको लागि अनुमोदित छ।
इबुप्रोफेन (आईबुप्रोफेन कुपन) एक सामान्यतया लिइएको NSAID हो जुन ओभर-द-काउन्टर (OTC) वा प्रिस्क्रिप्शनको साथ खरीद गर्न सकिन्छ। इबुप्रोफेन यसको ब्राण्ड नाम, अडिल वा मोट्रिनबाट फेला पार्न सकिन्छ। ओटीसी आईबुप्रोफेन हल्का दुखाइ र ज्वरोको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जबकि प्रिस्क्रिप्शन-ताकत आईबुप्रोफेन गठियाको अधिक गम्भीर दुखाइको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। वयस्क र months महिना र सो भन्दा बढि बच्चाहरूमा दुखाईको उपचार गर्न यसमा अनुमोदित छ।
मँ cialis लिए पछि भ्याग्रा लिन सक्छु
डिक्लोफेनाक बनाम आइबुप्रोफेन बीच मुख्य भिन्नता
ब्रान्ड नाम के हो? डिक्लोफेनाक
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक ट्याब्लेट, इन्टरिक-लेपित ओरल ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज
सामयिक समाधान मौखिक ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? Mg० मिलीग्राम दिनको दुईदेखि तीन पटक To०० देखि mg०० मिलीग्राम प्रत्येक छ देखि आठ घण्टामा
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? तपाईंको डाक्टरले निर्देशन दिए अनुसार दैनिक १० दिन भन्दा बढि वा तपाइँको डाक्टरले निर्देशन गरे अनुसार
Diclofenac मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Diclofenac मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
Diclofenac र Ibuprofen द्वारा उपचारका सर्तहरू
डिक्लोफेनाक (डिक्लोफेनाक भनेको के हो?) अस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटोइड गठिया, र एन्कोइलोजिंग स्पोन्डिलाइटिसको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले डिसमेनोरिया वा मासिक धर्म क्रुम्प र माइग्रेनको दुखाई उपचार गर्न पनि मद्दत गर्दछ। इबुप्रोफेन (आइबुप्रोफेन भनेको के हो?) ले ओस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटोइड गठिया, र एन्कोइलोजिंग स्पोन्डिलाइटिसको पनि उपचार गर्न सक्दछ। एक NSAID पेनकिलर को रूप मा, आईबुप्रोफेन dysmenorrhea र माइग्रेन को साथ साथै हल्का दुखाई र ज्वरोहित गैर-पर्चेसी डोजमा पनि उपचार गर्न सक्छ।
सर्त डिक्लोफेनाक इबुप्रोफेन
एन्कोइलोजिंग स्पोन्डिलाइटिस हो अफ-लेबल
डिसमेनोरिया हो हो
माइग्रेन हो हो
के डिक्लोफेनाक वा आइबुप्रोफेन बढी प्रभावकारी छ?
डिक्लोफेनाकलाई तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा पर्चेको आवश्यकता पर्दछ र इबुप्रोफेन भन्दा बढी शक्तिशाली एनएसएआईडी मानिन्छ। जोर्नीशोथका लागि डिक्लोफेनाक प्राय: २ to देखि mg० मिलीग्राम दैनिक खुराकमा १ 150० मिलीग्रामसम्म गरिन्छ। इबुप्रोफेन 32०००० मिलीग्रामको दैनिक खुराक सम्म mg०० मिलीग्रामको उच्च खुराकमा निर्धारित गरिन्छ।
मा मेटा-विश्लेषण आर्थ्राइटिस रिसर्च एण्ड थेरापी जर्नलबाट, डिक्लोफेनाक इबुप्रोफेन भन्दा बढी गम्भिर दुखाई राहतको लागि पाउन सकिन्छ। अध्ययनले १ 176 भन्दा बढी बिरामीहरूको साथ अध्ययनहरूको डाटा समीक्षा गरेको छ। पेट सम्बन्धित असरहरूको जोखिम पनि आइबुप्रोफेनको तुलनामा डिक्लोफेनाकसँग कम पाइएको थियो। Diclofenac अधिक प्रभावकारी फेला पर्‍यो जब अन्य NSAIDs जस्तै celecoxib र को तुलनामा नेप्रोक्सेन ।
दुबै डिक्लोफेनाक र आईबुप्रोफेन उपयुक्त डोजमा तुलना गर्न सकिन्छ। तपाईंको चिकित्सकसँग तपाईंको उपचार विकल्पहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस् किनकि यसले तपाईंको लागि उत्तम कार्य गर्दछ।
कभरेज र डिक्लोफेनाक बनाम आईबुप्रोफेनको लागत तुलना
धेरै मेडिकेयर र स्वास्थ्य बीमा योजनाहरु diclofenac को सामान्य संस्करण कभर। डिक्लोफेनाकको औसत खुद्रा लागत $ 60 को आसपास हुन सक्छ। यो लागत एकलकेयर कूपन कार्डको साथ -30 २०- .० सम्म कम गर्न सकिन्छ।
जेनेरिक आईबुप्रोफेन को लागी, लागत प्राय सबै चिकित्सा र बीमा योजनाहरु द्वारा कवर गरीन्छ। बीमा बिना, औसत खुद्रा लागत $ from देखि लगभग $ per प्रति बोतलको हुन सक्छ। जहाँसम्म, एक आईबुप्रोफेन कूपनको साथ, मूल्य $ as को रूपमा कम हुन सक्छ।
मानक खुराक Mg० मिलीग्राम 400-800 मिलीग्राम
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे । 3- $ 46 $ ०- $ २२
एकलकेयर लागत -30 २०- .० $ 3
डिक्लोफेनाक र आईबुप्रोफेनको साइड इफेक्टहरू
डिक्लोफेनाक र आइबुप्रोफेनको साधारण साइड इफेक्टहरूमा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्टहरू जस्तै डाईरिया, अपच, पेट फूलना वा ग्यास, पेट दुखाइ वा ऐंठन, ईर्ष्या, र कब्जजस्ता सामूहिक असरहरू पर्दछन्। यी औषधीहरूले केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) लाई पनि असर गर्न सक्छन् र चक्कर र टाउको दुखाइ जस्ता साइड इफेक्ट पैदा गर्न सक्छ। अन्य साइड इफेक्टमा प्रुरिटस (खुजली) र एडेमा (हात, हतियार, खुट्टा, वा खुट्टामा सूजन) समावेश छ।
अधिक गम्भीर प्रतिकूल असरहरूमा पेटको अल्सर र गुर्दा वा कलेजो समस्याहरू पर्दछन्। यी साइड इफेक्टहरू हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ यदि तपाईंसँग तिनीहरूको ईतिहास छ वा अन्य औषधीहरू खाँदै हुनुहुन्छ जुन NSAIDs का साथ कुराकानी गर्न सक्दछ।
अपच हो १% -१०% हो १% -3%
फ्याटुलेन्स हो १% -१०% हो १% -3%
पेट ऐंठन हो १% -१०% हो १% -3%
कब्ज हो १% -१०% हो १% -3%
ईर्ष्या हो १% -१०% हो %%-%%
मतली हो १% -१०% हो %%-%%
बान्ता हो १% -१०% हो १% -3%
खुजली हो १% -१०% हो १% -3%
इडेमा हो १% -१०% हो १% -3%
स्रोत: डेलीमेड ( डिक्लोफेनाक ), डेलीमेड ( इबुप्रोफेन )
डिक्लोफेनाक बनाम आइबुप्रोफेनको ड्रग अन्तर्क्रिया
डिक्लोफेनाक र आईबुप्रोफेन एनएसएआईडी हुन् जसले एन्जियोटेन्सीन-रूपान्तरण गर्ने एन्जाइम (एसीई) अवरोधक, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लकरहरू (एआरबी), बीटा ब्लकरहरू, र डायरेटिक्स जस्ता रक्तचाप औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्। एनएसएआईडीले यी एन्टीहाइपरटेन्सिभ औषधिहरूको कम रक्त प्रभाव कम गर्न सक्छ।
रगत पातलो जस्तो एस्पिरिन वा वारफेरिनको साथ एनएसएआईडी लिदा रक्तस्राव हुने खतरा बढ्न सक्छ। यी औषधीहरूले अन्तर्क्रिया गर्दछ र पेटको अल्सरको जोखिम बढाउन सक्छ। एसएसआरआई एन्टीडिप्रेससन्टहरूसँग NSAIDs लिदा रक्तस्रावको खतरा पनि बढ्न सक्छ।
NSAIDs ले अन्य औषधीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न र शरीरमा तिनीहरूको स्तर बढाउन सक्छ। लिथियम, डिजोक्सिन, र मेथोट्रेक्सेट जस्ता औषधिहरूसँग NSAIDs लिदा प्रतिकूल साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ।
यदि तपाइँ एनएसएआईडी सुरु गर्नु अघि कुनै औषधी लिईरहनुभएको छ भने डाक्टर वा फार्मासिष्टको सल्लाह लिनुहोस्।
कति समय यो zoloft काम गर्न लाग्छ
औषधि ड्रग क्लास डिक्लोफेनाक इबुप्रोफेन
फ्लुओक्सेटीन चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक इनहिबिटर (एसएसआरआई) एंटीडिप्रेसन्ट हो हो
डेसेभेन्फाक्सिन सेरोटोनिन-नोरपाइनफ्रिन पुनःअपटेक इनहिबिटर (SNRI) antidepressant हो हो
बेनाजेप्रिल Angiotensin- रूपान्तरण एंजाइम (ACE) अवरोधकर्ताहरू हो हो
Candesartan एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लकरहरू (एआरबी) हो हो
Atenolol बीटा-ब्लकरहरू हो हो
फ्युरोसेमाइड डायरेटिक्स हो हो
डिक्लोफेनाक र इबुप्रोफेनको चेतावनी
NSAIDs को प्रयोगले हृदय सम्बन्धी घटनाहरू जस्तै हृदयघात र स्ट्रोकको बढ्दो जोखिम निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईंसँग तिनीहरूको मेडिकल इतिहास छ भने। NSAIDs मुटुको विफलता बिगार्न वा रक्तचाप औषधि को प्रभाव बदल्न सक्छ। NSAID ले पेट र आन्द्रामा रक्तस्राव वा अल्सर जस्ता जठरांत्र सम्बन्धी घटनाहरूको जोखिम पनि बढाउन सक्छ।
डिक्लोफेनाक र आईबुप्रोफेनलाई बेवास्ता गर्नु पर्दछ वा कलेजोको समस्या भएका व्यक्तिहरूमा निगरानी गर्नुपर्छ। NSAID ले लि्ग र मिर्गौलामा विषाक्तताको जोखिम बढाउन सक्छ।
NSAIDs लेट गर्भावस्थाको समयमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। St० हप्ता गर्भावस्था पछि NSAIDs लिनु भ्रुणको मुटुमा रक्त वाहिनी डक्टस धमनी धमनीको अकाल बन्द हुन सक्छ। गर्भवतीको प्रारम्भिक चरणहरूमा NSAIDs प्रयोग गर्ने बारेमा तपाइँको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् किनभने उनीहरूले मात्र लिनु पर्छ यदि सम्भावित फाइदाहरू जोखिमलाई बढाउँछन्।
डिक्लोफेनाक बनाम आइबुप्रोफेनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
डिक्लोफेनाक भनेको के हो?
डिक्लोफेनाक एक एनएसएआईडी हो वयस्कहरूमा गठियाको उपचारको लागि। यो एफडीए ओस्टियोआर्थराइटिस, संधिशोथ, र ankylosing स्पोंडालिटीस को लागी अनुमोदित छ। डिक्लोफेनाक प्रायः प्रिस्क्रिप्शन मौखिक ट्याब्लेट वा सामयिक जेलको रूपमा आउँदछ र दिनको दुई वा तीन पटक प्रयोग हुन्छ।
इबुप्रोफेन एक NSAID हो जो गठिया को दुखाई र सूजन को उपचार गर्न प्रयोग गरीन्छ। वयस्कहरू र बच्चाहरूमा दुखाइ र ज्वरोको उपचार गर्नको लागि यो काउन्टरमा उपलब्ध छ। प्रिस्क्रिप्शन-सामर्थ्य आईबुप्रोफेन पनि उपलब्ध छ र प्राय: 8 देखि taken घण्टामा लिन्छ।
के डिक्लोफेनाक र आईबुप्रोफेन उस्तै छन्?
होईन, डिक्लोफेनाक र आईबुप्रोफेन एकै होइनन्। डिक्लोफेनाक एक प्रिस्क्रिप्शन एनएसएआईडी हो जबकि आईबुप्रोफेन ओभर-द-काउन्टर वा प्रिस्क्रिप्शनको साथ खरीद गर्न सकिन्छ। डिक्लोफेनाक वयस्कहरूको लागि मात्र सिफारिस गरिएको हुन्छ जबकि आईबुप्रोफेन बच्चाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के डिक्लोफेनाक बनाम आइबुप्रोफेन राम्रो छ?
डिक्लोफेनाकलाई इबुप्रोफेन भन्दा बढी शक्तिशाली मानिन्छ र दिनको दुई वा तीन पटक लिनु आवश्यक छ। इबुप्रोफेनलाई जोर्नीशोथबाट हुने पीडाको उपचार गर्नको लागि प्राय: अधिक मात्रामा लिनु पर्छ।
के म गर्भवती हुँदा डिक्लोफेनाक बनाम आइबुप्रोफेन प्रयोग गर्न सक्छु?
NSAIDs diclofenac र Ibuprofen को गर्भावस्था को समयमा जोगिनु पर्छ। गर्भावस्थाको पछिल्लो भागमा एनएसएआईडी लिनाले भ्रुणको मुटुको समस्या हुन सक्छ। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भने डाक्टरको परामर्श लिनुहोस्।
के म दारुको साथ डिक्लोफेनाक बनाम आइबुप्रोफेन प्रयोग गर्न सक्छु?
डिक्लोफेनाक र आईबुप्रोफेन रक्सीको सेवनबाट अलग रहनु पर्छ। NSAIDs को साथ रक्सी पिउँदा रक्तस्राव र अन्य साइड इफेक्ट जस्तै चक्कर आउने र टाउको दुखाइ को जोखिम बढ्न सक्छ।
के डिक्लोफेनाक इबुप्रोफेन भन्दा कम्मरको दुखाईको लागि राम्रो छ?
Diclofenac रीढ़ हड्डी लाई असर गर्छ कि गठिया को लागी FDA- अनुमोदित छ। आईबुप्रोफेनको तुलनामा कम डोजमा यो अधिक प्रभावकारी हुन सक्छ। डिक्लोफेनाक र आईबुप्रोफेन, प्राय जसो NSAIDs ले पनि दुखाई व्यवस्थापन र ईन्फ्लेमेसनको साथ मद्दत गर्न सक्छ।
के डायक्लोफेनाक इबुप्रोफेन भन्दा सुरक्षित छ?
डिक्लोफेनाकलाई डाक्टरको मूल्यांकन र प्रयोग गर्न पर्ची। इबुप्रोफेन काउन्टर भन्दा माथि छ र त्यसैले पीडा वा ज्वरो जस्ता सामान्य रोगहरूको लागि सुरक्षित मानिन्छ।
के म डिक्लोफेनाक र आईबुप्रोफेन लिन सक्छु?
होईन। डिक्लोफेनाक र आईबुप्रोफेन सँगै लिनु हुँदैन किनभने उनीहरूले समान तरिकाले काम गर्दछन्। तिनीहरूलाई सँगै लिएर प्रतिकूल घटनाहरू र साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ।
के म भियग्रा र cialis सँगै लिन सक्छु
महिलाले कति भिटामिन डी लिनुपर्छ?
के मलाई गर्भावस्था मा फ्लू शट लिनु पर्छ?
जब सबै भन्दा राम्रो समय एलर्जी औषधि लिन को लागी हो
महिला खुजली को लागी सबै भन्दा राम्रो उत्पादन के हो?
जन्म नियन्त्रण एक औषधि परीक्षण मा देखाइनेछ
baclofen औषधि परीक्षण मा देखाउँछ